Hurumende Inowirirana neVashandi Vayo Mihoro
Vashandi vehurumende vanga vachida kuti mushandi wepasi atangire pamadhora mazana mashanu nemakumi mana pamwedzi
WASHINGTON DC — Vari kumirira vashandi vehurumende pamwe nevari kumirira hurumende munhaurirano dzemihoro vanoti vawirirana kuti hurumende haina mari yakawanda yekuti iwedzere vashandi vayo mihoro, izvo zvinonzi zvazoita kuti vashandi ava vatambire zvanga zvichipiwa nehurumende.
Zvinonzi zvikwata izvi zvanyorerana pasi chibvumirano chekuti hurumende haina mari, uye kuti panofanirwa kuramba paine kutaurirana pakati pavo kuitira kana paine shanduko dzinenge dzichida kuitwa dzigadziriswe.
Kubva mune zvinonzi zvapiwa nehurumende, mushandi wepasi ari muGrade B1 anonzi awedzerwa madhora makumi manomwe nemapfumbamwe kuenda pamadhora mazana maviri negumi nemasere, kubva pamadhora zana nemakumi mashanu nemapfumbamwe.
Mari dzekubatsirikana nekufambisa dzinonzi dzaramba dziri pamadhora makumi matanhatu nematanhatu, dzepekugara dzichirambirawo dziri pamadhora makumi mapfumbamwe nerimwe.
Izvi zvinonzi zvasiya mushandi uyu ave kutambira madhora mazana matatu ane makumi manomwe neshanu, kusanganisira mari dzekubatsirikana idzi achibva pamadhora mazana maviri nemakumi mapfumbamwe ane madhora matanhatu pamwedzi.
Murairidzi wepasi ari muGrade D1 anonzi anenge otambira mazana mashanu emadhora kubva pamazana mana nemakumi mana ane madhora matanhatu, zvichireva kuti awedzerwa madhora makumi mashanu nemana.
Mushandi ari muGrade E 1 anonzi anenge otambira madhora mazana matanhatu nemakumi maviri nematatu, kubva pamadhora mazana mashanu nemakumi matatu nerimwe pamwedzi.
Hurumende inonziwo yaramba yakaomera pakuti poverty datum line iri pamadhora mazana mashanu nemadhora mashanu pamwedzi, kwete madhora mazana mashanu nemakumi mana emadhora yaidiwa nevashandi vayo.
Gurukota rezvemari, VaPatrick Chinamasa, vanoti hurumende haina mari izvo zviri kuipa kuti itadze kuita zvizhinji zvainofanirwa kunge ichiita.
VaChinamasa vari kutarisirwa kukumbira paramende kuti ipasise bhajeti regore rino panovhurwa paramende neChipiri.
Asi sachigaro weApex Council uye vari mutungamiri weZimbabwe Teachers Association, VaRichard Gundani, vanoti chibvumirano chavanyorerana pasi ichi chaitwa mushure mekuona mamiriro ezvinhu munyika.
Asi mutungamiri werimwe sangano revarairidzi, rePorgressive Teachers Union of Zimbabwe, VaTakavafira Zhou, vanoti sesangano havana kufara nezvatambirwa kumusangano uyu.
Asi vati sezvo vanga vasina masimba ekutaura sesangano, vachamirira kunzwa zvichabva kunhengo dzavo pamusoro pezvawiriranwa izvi.